Àmà: Olee otú m nwere baptism nke Mmụọ Nsọ | Apg29
Àmà: Olee otú m nwere baptism nke Mmụọ Nsọ
M na-echeta na ọ sịrị, "site na Mọ Nsọ baptism na-ike."
Ọ bụ ihe magburu onwe ya jupụta na Mmụọ Nsọ. Ị na-eche na Mmụọ dị ka isi iyi nke na-asụpụta n'ime ime, a isi iyi na-aga na ike na ọṅụ.
Mgbe m bụ a ọhụrụ kwere ekwe, m gara nzukọ a uka na-adịghị anya obodo m. The Assembly kpọrọ a-eto eto nkwusa ozioma nwere nzukọ a izu. Ọ na-egwuri na accordion, na-abụ abụ na-ekwusa ozi ọma. Na otu n'ime ọmụmụ ihe, ọ na-ekwu banyere baptism na Mmụọ Nsọ. M na-echeta na ọ sịrị, "site na Mọ Nsọ baptism na-ike."
Ọkwọrọikọ na-agba akaebe pụtara na m nwere ọchịchọ siri ike nke ime baptism na Mmụọ Nsọ. M chere: "Ike bụ ihe dị m mkpa iji merie m nicotine agụụ."
Mgbe m bịara n'ụlọ mgbe nzukọ ahụ, ọ bụ ọchịchịrị, n'ihi na ọ bụ n'ọnwa nke October. Mgbe ọ bụ oge maka ụra n'abalị, m nọdụrụ na sofa na nne na nna m. Ndị nne na nna na ụmụnne m ndị ọzọ ụlọ, ka m nọ naanị m na kichin. Ákwà-nkwuba e tupu-wired maka window, ma m nwere ike ịhụ n'ime abalị.
Ma, ọ ga-abụ mgbe Chineke na-abịa nso. Nsọ ya ọnụnọ pụtara na ị na-atụ ụjọ. Ma mgbe a ka, ka egwu na-ejupụta m a magburu onwe udo. M na-adịghị ekwu okwu na asusu di iche iche mgbe ahụ, ma ọ na mgbe e mesịrị.